Ny angovo azo havaozina dia mitentina 17,3% amin'ny fanjifana angovo farany | Fanavaozana maintso
Ny angovo azo havaozina dia mitentina 17,3% amin'ny fanjifana angovo farany
Tomàs Bigordà | | Herin'ny rivotra, Angovo Solar Photovoltaic, Angovo azo havaozina
Araka ny angon-drakitra tamin'ny faran'ny 2016 avy amin'ny Institute of Economic Studies (IEE), ny angovo azo havaozina nanampy a 17,3% do fanjifana farany angovo any Espana.
Ny fifanarahana tany Paris momba ny fanavaozana azo havaozina dia manondro fa ny EU iray manontolo dia tokony hahatratra ny salan'isa 2020% fandraisana avy amin'ny loharanom-baovao azo havaozina ka hatramin'ny fanjifana angovo farany tamin'ny taona 20.
1 Fahasamihafana eo amin'ny firenena
1.1 Firenena ambany salanisa
2 Angovo azo havaozina any Espana sy ny ho aviny
3 Vondrom-piarahamonina mahaleo tena
3.5 Nosy Canary
Fahasamihafana eo amin'ny firenena
Amin'izao fotoana izao, Suède no mpitarika hatreto, mahatratra 53,8%. Amin'ny lafiny iray dia nahatratra 38,7% i Failandy ary i Latvia 37,2%, raha i Austria kosa nanoratra 33,5% ary tena akaiky ny tanjonao tamin'ny taona 2020, ary i Danemark dia efa nihoatra izany, miaraka amin'ny 32,2%.
Ny firenena hafa toa an'i Latvia, Portugal ary Kroasia dia laharana eo ambony 28% ary Litoania sy Romania dia manodidina ny 25%. Amin'ny tranga Slovenia dia mahatratra 21,3% ary Bulgaria 18,8%, raha Italia kosa no misoratra 17,4%. Mikasika an'i Espana dia nandroso nihoatra ny teboka iray ary nihoatra ny salanisan'ny Vondrona eropeana, nahatratra 17,3% tamin'ny faran'ny 2016.
Firenena ambany salanisa
Mampalahelo fa i Frantsa dia efa ambanin'ny salanisa miaraka amin'ny 16%, toy ny tranga any Gresy, ny Repoblika Tseky ary i Alemana, miaraka amin'ny tarehimarika efa ho 15%. Ireo firenena any amin'ny farany ambanin'ny EU dia Malta, Netherlands ary Luxembourg, izay eo anelanelan'ny 6% sy 5,4%.
Angovo azo havaozina any Espana sy ny ho aviny
Taorian'ny taona ratsy vitsivitsy noho ny lalàna mifehy ny antoko malaza, dia miloka amin'ny fivoarana vaovao azo havaozina indray ireo Vondrom-bahoakam-paritra itsinjaram-pahefana. Ny lavanty natao tamin'ny 2016 sy 2017 manome ny fahafaha-mametraka 8.700 XNUMX megawatt hery vaovao
Hanana ireo fotodrafitrasa vaovao ireo fampiasam-bola mihoatra ny 8250 tapitrisa euro, ankoatry ny famoahana asa 90.000 mandritra ny dingana fametrahana.
Na izany aza, tena misy ny fampandrosoana azo havaozina tsy mitovy amin'ny fanjakana mizaka tena samihafa, araka ny fanamafisan'ny Fianarana ny fiantraikan'ny angovo azo havaozina any Espana navoakan'ny Association of the Renewable Energy Companies (APPA). Noho izany, Castilla y León dia mitarika ny fahalianana amin'ny 'angovo madio' miaraka amina 6.474 XNUMX megawatt, ny maro an'isa mankany amin'ny alàlan'ny rivotra. Manaraka azy ireo i Andalusia, Castilla-La Mancha ary Galicia. Mifanohitra amin'izany no izy, ny Nosy Balearic, Cantabria ary Madrid no eo amin'ny farany ambany amin'ity lisitra ity.
Herin'ny teknolojia azo havaozina 2016 (MW) napetraka
Fuente: Fikambanan'ny orinasa angovo azo havaozina
Avy eo isika dia hahita vaovao marobe izay manamafy ny filokana hanavaozana ireo vondrom-piarahamonina mahaleo tena.
Vondrom-piarahamonina mahaleo tena
Ny governemanta Aragon dia nanombatombana ny fampiasam-bola amin'ny Tetikasa rivotra 48, ho an'ny totalin'ny 1.667,90 MW, ary zavamaniry masoandro XNUMX photovoltaic, miorina ao amin'ny tanànan'ny Escatrón sy Chiprana miaraka amin'ny herin'ny 549,02 MWp.
Ity fironana ity dia nanomboka efa ho herintaona lasa izay rehefa nekena ny mason-tsivana vaovao hanome ity fanambarana ity amin'ny fampiasam-bola amin'ny angovo azo havaozina.
Ity Fahaleovan-tena ity dia manome fanampiana ny fanatsarana angovo amin'ny euro maromaro. Ny Birao dia mikasa ny handray anjara amin'ny tetezamita mankany amin'ny toekarena karbaona ambany amin'ny sehatry ny vokatra sy sosialy rehetra, ao anatin'ny rafitry ny tetika Fahombiazan'ny angovo 2016-2020, izay iharan'ny fandraisana anjaran'ny olom-pirenena ao amin'ny Open Government.
Araka ny governemanta Castilian-Leonese, misaotra ireo fandrisihana ireo dia mety hamatsy ara-bola ny fanatsarana ny toerana hafanana sy hazavana (raha toa ka voaporofo ny fitsitsiana angovo farafaharatsiny 20%), toy ny fitsabahana amin'ny ascenseur na escalator, raha 30% farafahakeliny ny fihenan'ny fihenan'ny angovo.
Any Galicia dia misy fitondrana rotsakorana avo kokoa noho izany, noho izany, ny angovo avy amin'ny masoandro dia tsy dia mandaitra loatra, nanolotra paikady hanatsarana ny angovo biomassa. Ny valin'ny fifandanjana dia izay Amin'ny faran'ny 2017, ny fametrahana boiler biomassa maherin'ny 4.000 ao amin'ny trano dia tohana.
Miaraka amin'ny teti-bola 3,3 tapitrisa euro, ny Xunta de Galicia dia maniry ny hampiroborobo ny fametrahana boiler biomass mba hampiroborobo ny famokarana angovo azo havaozina ary hampihena ny fandefasana entona entona ao amin'ny governemanta 200 mahery, fikambanana tsy mitady tombombarotra ary orinasa galisiana.
Ny Nosy Balearic dia mampitombo ny fahalianany amin'ny angovo azo havaozina. Ny Tale jeneralin'ny angovo sy ny fiovan'ny toetrandro dia manamboatra tetikasa vaovao fito ho an'ny valan-javaboary photovoltaicMidika izany fa fiakarana 25% amin'ny herinaratra azo havaozina napetraka ao amin'ireo nosy ankehitriny. Tetikasa madinidinika ireo ary 20 MW mahery ny totaliny.
Azo jerena fa ireo tetikasa vaovao dia tsy maneho fahefana vaovao marobe, ny talen'ny jeneraly Camabio angovo sy ny toetrandro, Joan Groizard, dia nankasitraka ny fandraisan'izy ireo anjara. Indrisy, ankehitriny any amin'ny Nosy Balearic dia tsy misy afa-tsy 79 megawatt misy angovo azo havaozina napetraka.
Misaotra ny Fund Canary Islands Development Fund, ny FDCAN, mihoatra ny Tetikasa 90 hanatsarana ny fitantanana angovo natolotry ny tanàna sy oniversite ary filankevitra, dia hahazo famatsiam-bola 228 tapitrisa euro.
Ny Governemantan'ny nosy Canary dia nitatitra fa ireo tetik'asa ireo mikendry ny hitombo ny fampiasana angovo azo havaozina, manatsara ny fahombiazan'ny angovo ary mampivelatra ny fivezivezena maharitra, mba hahafahana mametraka maodely angovo mety kokoa any amin'ireo Nosy Canary.
Andriamatoa Fernando Clavijo, filohan'ny Nosy Canary amin'izao fotoana izao, dia nanambara tamin'ny fanambarana iray tany amin'ny faritany iray toa ny Nosy Canary Ilaina ny fampiroboroboana ireo tetik'asa mamela hampiroborobo ny fitsitsiana angovo sy ny fahombiazany, mampihena ny vidiny ary mandroso amin'ny fampandrosoana modely maharitra sy mifaninana kokoa.
Clavijo dia mihevitra fa ny Nosy Canary dia manana fepetra voajanahary tonga lafatra, izay mamela ny fampiroboroboana ny fampandrosoana ny havaozina, tsy ny hiroso amin'ny fanovana ny maodelin'ny angovo ihany, fa koa ho hetsika hanatsarana ny toe-karen'ireo nosy, ary amin'izany hampiakarana ny harin-karena faobe.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » Ny angovo azo havaozina dia mitentina 17,3% amin'ny fanjifana angovo farany
Francisco Ruben Torres dia hoy izy:
Lahatsoratra mahafinaritra, misaotra betsaka.
Valiny tamin'i Francisco Rubén Torres
Ny fanambin'ny tanàna azo havaozina
Costa Rica dia omena mandritra ny 300 andro fotsiny amin'ny angovo azo havaozina